लगानी विज्ञहरूको अन्तरक्रिया गर्ने थलो बनाउँछौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता लगानी विज्ञहरूको अन्तरक्रिया गर्ने थलो बनाउँछौं
डा. मनोज शाही, अध्यक्ष, एशोसिएशन अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेशनल्स नेपाल (एआईपीएन)
वित्तीय साक्षरता, गोष्ठी, सम्मेलनलगायत कार्यक्रममार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न एशोसिएशन अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेशनल्स नेपाल (एआईपीएन) स्थापना भएको छ । गत वर्ष कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको नाफा नबाँड्ने उक्त संस्थाले आज (शुक्रवार) औपचारिक शुरुआत गर्दै छ । १२ जना सदस्यबाट शुरू गरिएको यो संस्थाले सीएफए (चार्टर फाइनान्सियल एनालिस्ट) कोर्स अध्ययन गरेका तथा यसबाहेक करीब ४ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिँदै जाने बताएको छ । स्थानीय तथा विश्वव्यापी स्तरमा सीएफए चार्टर होल्डर र अन्य लगानी विज्ञहरूको अन्तरक्रिया गर्ने थलो बनाउन खोलिएको बताउने एआईपीएनका अध्यक्ष डा. मनोज शाहीसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानी :
एआईपीएन स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
गत वर्ष कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको यो नाफा नबाँड्ने कम्पनी हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक हितका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, पूँजीबजारमा नैतिक व्यावसायिकता स्थापित गर्ने र लगानीकर्तालाई सहज गराउने गरी वित्तीय विश्लेषण तथा विभिन्न अध्ययन गर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय तुलनामा नेपालको पूँजीबजार सानै छ । पूँजीबजार विकासका लागि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । यस क्षेत्रको व्यावसायिकता र विज्ञहरू बढाउँदै लैजान जरुरी छ । अडिट गर्न आधिकारिक (सर्टिफाइड) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) चाहिन्छ भने पूँजीबजारमा लगानी व्यवस्थापन गर्न सीएफए । सीएफएले आम ग्राहकलाई लगानीसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, व्यावसायिकता र नैतिकतामा केन्द्रित भएको सीएफए पाठ्यक्रमलाई पनि नेपालमा प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ ।
सस्तोमा किन्नु महँगोमा बेच्नु भनेको आधारभूत कुरा हो । आधारभूत विश्लेषण सबै देशमा उस्तै हो तर फरक भनेको सन्दर्भ र नीतिगत व्यवस्था हो । अन्तरराष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था भएको आईएफआरएस (अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान) लाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्दै वित्तीय विवरण तयार पार्न एनएफआरएस (नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान) लागू भइसकेको छ । यदि सीएफए चार्टर होल्डर छन् भने उनीहरूले यसलाई सहज रूपमा बुझ्छन् । सीएफए कोर्सको अन्तरराष्ट्रिय स्तर एउटा छ, तर यसमा अध्ययन गर्ने विषयमध्ये करीब १० प्रतिशत स्थानीय विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा हामी सदस्यलाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छौं ।
तपाईहरूले सीएफए कार्यक्रमलार्ई जोड दिनुको कारण के हो ?
वित्तीय विश्लेषण गर्ने जुनसुकै कामका लागि यो लाभदायी कार्यक्रम हो । लगानी व्यवस्थापन गर्न वित्तीय विश्लेषण जरुरी छ । तथ्यांकीय वित्तीय विश्लेषण, फन्ड व्यवस्थापन गर्न पोर्टफोलियो विश्लेषण, बैंकको क्रेडिट विश्लेषण ( कम्पनी तथा परियोजनामा किन कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे), म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन अन्तर्गत भ्यालुएशन लगायतको विश्लेषण गर्न सीएफए कोर्स गरेको विज्ञता आवश्यक पर्छ । पूँजीबजारको हकमा यो कोर्सको अध्ययनले हरेक कम्पनीको आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास गर्दछ । दोस्रो बजारमा कुनै कम्पनीको प्रतिशेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँ छ भने त्यो मूल्य ठीक छ कि छैन भनेर आधारभूत विश्लेषण गर्न सीएफए चार्टर होल्डर सक्षम हुन्छन् । साथै, जोखिम व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ । नेपालमा पूँजीबजारमा पनि विदेशी विनिमय जोखिम छ । किनकि नेपालमा रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा भित्रिन्छ । विदेशी विनिमयमा तलमाथि हुँदा असर पर्छ ।
यो कार्यक्रम अध्ययन गर्न तीन तहको परीक्षा दिनुपर्छ । करीब ३ वर्षमा अध्ययन सकिन्छ । अध्ययनले मात्र हुँदैन, ४ वर्ष जतिको वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि चाहिन्छ ।
संस्था शुरू गरिएको छ, अब बजारबाट सीएफए चार्टर होल्डरलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
यो नियामक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको संस्था हो । यो रूपमा हामी अहिले छैनौं । हामीले स्वनियमनकै आधारमा काम गर्ने हो । बजारमा चार्टर फाइनान्सिङको फाइदाबारे बुझाउँछौं ।
तपाईहरूले पूँजीबजारको विश्लेषण गर्ने भन्नुभएको छ । यस्तो विश्लेषण शुरू गरेपछि अब समग्र पू“जीबजार विकासमा तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
हामीले अब विस्तारै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने चुनौतीका कार्यक्रम गर्नेछौं । जस्तै, सम्पत्ति मूल्यांकन (इक्विटी भ्यालुएशन) कुन आधारमा गर्ने, के के हेर्ने भन्ने जानकारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई कुन कम्पनीको शेयर किन्ने, होल्ड गर्ने वा बेच्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विश्लेषण आवश्यक पर्छ । यसबारे विश्वविद्यालयलाई सहभागी गर्नेछौं ।
त्यसो भए पूँजीबजार सुधारमा के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
हामी सम्भव भएसम्म सञ्चार माध्यममार्फत लगानीकर्तालाई सचेत गर्ने लेखलगायत सामग्री दिनेछौं । हामी आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषणबाट पनि सुझाव दिन सक्छौं । सकेसम्म सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सुझाव दिन्छौं । सबैले जोखिमबारे बुझ्न जरुरी छ । लगानी गरिएको कम्पनीबारे ज्ञान हुनुपर्छ र बुझ्दै नबुझी अरूले जबर्जस्ती किन र बेच भनेको भरमा कारोबार गर्नुहुँदैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीलगायतमा लगानी गर्दा मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछौं । हामी विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन गरेर पूँजीबजारबारे जनचेतना फैलाउन सक्छौं ।
यस्ता कार्यक्रममा लगानीकर्ता कसरी सहभागी हुन सक्छन् ?
हामी नाफारहित संस्था भए पनि सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै शुल्कसहित त कुनै शुल्करहित कार्यक्रम गर्नेछौं । संस्थाको सदस्यता शुल्कले मात्र चल्दैन ।
एआईपीएनले नियमन निकायसँग कस्तो सहकार्य खोजेको हो ?
नियमन निकायले सुझाव मागेको बेला अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा भएका राम्रा अभ्यासलाई हेरेर प्रस्तावित नीतिनियमबारे सुधार गर्न सुझाव दिन्छौं । नियमन निकायलाई पनि सुझावको खाँचो पर्छ । हामीले यसबारे काम पनि शुरू गरिसक्यौं । हामी नियामक निकायलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सीएफए इन्स्टिच्युटका स्रोतलाई प्रयोग गरेर केही गर्न सक्छौं । नियामक निकाय, लगानीकर्ता, विश्लेषक हरेकका लागि नयाँ प्रविधि, विकासबारे जान्न जरुरी छ । अहिले बजारमा नेप्से ओरालो लाग्यो भनेर गुनासो गर्छन् । लगानीमा सबैलाई ‘बटम’ र ‘टप पिक’ गर्न गाह्रो हुन्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रमा राम्रो वृद्धि भए मात्र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा वृद्धि गराउने हो । अहिले पूँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनी करीब ९५ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रका छन् । प्रायः यस्ता कम्पनीले धितोमा आधारित भएर कर्जा दिने गर्छन् । अर्थात् उनीहरू सुरक्षित छन् । जोखिममा छैनन् । अन्त्यमा जोखिम सबै गएर रियल सेक्टरमा पर्छ । यस्तो जोखिम नेपालमा बढी छ । हुन त संसारभरि नै रियल सेक्टरको कारण जोखिम व्योहोर्नु परेको अवस्था छ । नेपालमा समग्र पूँजीबजार विकास गर्ने हो भने उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । खास अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । यस्तो विकास गर्ने नीति भएमा उद्योग र कलकारखाना फस्टाउँछन् । यसले पूँजीबजारको समेत स्थायित्व हुन्छ ।
नेपालमा पूँजीबजार खासै वृद्धि हुन सकेन भन्नुभयो । के नीतिगत व्यवस्थाको कारणले नै पूँजीबजार वृद्धि हुन नसकेको हो त ?
मेरो भनाइ ऋणपत्र बजार (डेब्ट मार्केट) सोचेजस्तो चलेको छैन भन्ने हो । काठमाडौंको अन्तर बैंकदर सार्वजनिक हुने व्यवस्था छैन । व्यवस्था गरे राम्रो हुन्छ । यसो भयो भने सबैको दर एउटै हुन्छ र सबैलाई थाहा पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा फ्लोटिङ लेन्डिङ गर्न सकिन्छ । काठमाडौं अन्तर बैंकदरमा थप यति भनेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिन्छ । भोलि यसको आधारमा डेरिभेटिभ बनाउन सकिन्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा ऋणको खरीदविक्री (लोन ट्रेडिङ) हुँदैन, यद्यपि अहिले भर्खर हुन थालेको छ भन्ने सुनेको छु । यस्तो कारोबार बैंकबीच मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै कम्पनीले पनि ऋण किन्न सक्छन् । यस्तो नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । यसो भएमा कर्जाबाट तरल बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) घट्नुको कारण के जस्तो लाग्छ ?
संसारमा २ सयभन्दा बढी देश छन् । लगानीकर्ताले प्रतिफल नै हेर्ने हो । उनीहरूलाई कम जोखिममा बढी प्रतिफल अरू देशबाटै आउँछ भने किन नेपाल आउँछन् ? यस्तो लगानी नेपालमा भिœयाउने हो भने शुरूमा सरकारले नै केका लागि ल्याउने भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । यस्ता लगानी नभित्रिएका पनि होइनन् । जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा लगानीको प्रतिफल राम्रो देखेर आएका छन् । यस्तै, नेपालमा डाबर, युनिलिभर, केएफसी जस्ता कम्पनी बजार सम्भावना देखेर आए । उनीहरू वित्तीय सुरक्षा खोजेर आएका त होइनन् । जलविद्युत् जस्ता केही जोखिमका परियोजनामा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा उदारवादी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पूर्वाधार विकासको हकमा भने सरकारले नै लगानी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । चीन, जापान, अमेरिकाजस्ता मुलुकको पूर्वाधार विकास सरकारकै लगानीमा भएका हुन् ।
अब तपाईहरूले पूँजीबजार विकासमा के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
यो हाम्रो शुरुआत हो । संस्थाका हामी सबै स्वयंसेवी हौं । हामी सबै आआफ्नै पेशामा आबद्ध छौं । फुर्सदमा हामी काम गर्छौं । हामी अहिले १२ जना छौं । हाम्रो उद्देश्य यसलाई बढाउँदै जाने रहेको छ । सदस्य र हाम्रो आम्दानीको स्रोत पर्याप्त भएपछि अनुसन्धान डिभिजन खोल्न सक्छौं । यसले बजारको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, वित्तीय साक्षरतामा काम गर्न सकिन्छ । समय लाग्छ । हामीले चार्टर होल्डर बढाउनु छ । उहाँहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछौं । सीएफए चार्टर होल्डरमार्फत सरकारलाई सघाउन सक्छ भनेर लविङ गर्नेछौं । सरकारले सधै विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्दैन । सीएफए चार्टर होल्डरले समेत त्यस्तो काम गर्न सक्छन् ।